चिसाे पानीले नुहाउदा हुने फाइदाबारे जान्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
गर्मी मौसममा प्राय सबै मानिसलाई चिसो पानीले नुहाउन मन पर्छ । यसले शरीरलाई शीतलता प्रदान गर्नुका साथै शरीर सफा राख्नमा मद्दत गर्छ । यति मात्र नभई चिसो पानीले नुहाउँदा मस्तिष्कलाई ठन्डा बनाउँछ ।
यसका अलावा चिसो पानीले नुहाउँदा हुने फाइदाहरु यसप्रकार छन् ।
१. चिसो पानीले नुहाउँदा शरीरमा रहेको यूरिक एसिडलाई चलायमान बनाउनुका साथै बिभिन्न चोटपटक लागेका दाग तथा खतमा बस्ने ब्याक्टेरिया हटाउन मद्दत गर्छ ।
२. चिसो पानीले नुहाउँदा पुरुषको प्रजनन क्षमतामा बृद्धि ल्याउनमा मद्दत गर्छ ।
३. चिसो पानीले नुहाउँदा शरीरमा आनन्द आउनुका साथै यसले शरीरमा रक्तसञ्चार प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
४. यसले शरीरमा रोगसंग लड्न सक्ने क्षमत अर्थात् रोगप्रतिरोधात्मक क्षमतामा बृद्धि गर्छ ।
५. चिसो पानीले नुहाउँदा शरीरमा आँफै तापको मात्रामा बृद्धि हुन्छ जसले पाचन प्रक्रियालाई मजबुद बनाउँछ ।
६. यदि तपाइँ ब्यस्त भई थकित महसुस गर्नुभएको छ भने चिसो पानीले नुहाउनुस् यसले तपाइँको थकान कम गर्नुका साथै शरीरलाई फूर्तिलो बनाउँछ ।
के चिसो पानीले नुहाउदा फाइदा हुन्छ ?
काठमाडौँ । सधै चिसो पानीले नुहाउनु अर्थात् कोल्ड सावर लिन शरिरको लागि लाभदायी हुने देखिएको छ ।
चिसो पानीमा नुहाउदा तपाईको बानीमा सकारात्मक सुधार आउने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसका फाइदाहरुमा रक्त संचार राम्रो हुन्छ , तनाव कम हुन्छ, उत्साह र जागरुपतामा बृद्धि हुने जस्ता रहेका छन् ।
सधै बिहान उठेर चिसो पानीले नुहाउने बानीले तनाव र चिन्ता कम गराउन मदत गर्छ । बोसो कम गर्न र मांसपेशीलाई मर्मत गर्नका साथै व्यायम पनि गर्दा मांसपेशीहरुलाई मजबुद बनाउन सहयोग गर्दछ ।
यो एक स्पष्ट तथ्य हो की चिसो पानीले हाम्रो छालामा छुदा झनझनावट हुन्छ तर शरीरको तनावमा यसले यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ जसले दिलको धड्कन र रक्तसंचार बढ्दछ ।
अर्को तिर घरेलु स्तरमा पनि चिसो पानीले नुहाउनु सुरक्षित मानिन्छ । चिसोपानीले शरिरलाई कुनै नोक्शान पुर्याउदैन् । तर धेरै बिरामी बुढापाकाको लागि भने असर गर्न सक्छ ।
विशेषज्ञले भनेका छन यद्यपि कसैलाई कोल्ड शावरले चिन्ता र तनावको समस्या कम गराउन सहयोग गर्छ । चिसो पानीले नुहाउदा शरिरको हानिकारक रसायन तथा हर्मोन शरिरबाट बाहिर निश्कन्छ र व्यक्तिको तनाव कम महशुस हुन्छ ।
प्रतिरक्षा प्रणालीको लागि
२०१६ को प्लस वान नामक पत्रिकामा एक अध्ययन छापिएको थियो जसमा कोल्ड सावर को स्वास्थमा पर्ने प्रभाव बताएको थियो । अध्ययन अनुसार ९० दिनसम्म दैनिक लगातार चिसो पानीले नुहाएर गरिएको अध्ययनबाट २९ प्रतिशत मानिसमा सकारात्मक असर पारेको पत्ता लागेको थियो ।
अध्ययनको क्रममा यी मानिसले तातो पानीले सामान्य सावरको अन्तमा उनीहरुले ३०, ६० र ९० सेकेन्डको अवधीको लागि चिसो पानीले नुहाउन भनिएको थियो ।
सोधकर्ताले कोल्ड सावर लिनाले कुनै फ्लु नहुने, यसको कुनै नकारात्मक असर नपर्ने पत्ता लगाएका थिए र धेरै बेरसम्म नुहाउदा पनि यसको असर पदैन् ।
चिसो पानीले नुहाउदाको खास फाइदा त उनीहरुमा उर्जा बढि भएको महशुस गरेका थिए ।
चिसो पानीले नुहाउनाले व्यायमपछि हुने दुखाइमा आरम दिने पाइएको थियो । तर यसले काम गर्छ गर्दैन भन्ने वैज्ञानिक प्रमाण छैन् ।
केही अध्ययनले स्वास्थ्यमा सुधार आउने बताए पनि केही अध्ययनले भने मांसपेशीको अनुकुलन गराउने क्षमतामा कमी ल्याउने बताएका छन् ।
पानी पिउनुको पनि आफ्नै नियम छ, पालना गरे फाइदा नगरे बेफाइदाः
पानी कति पिउने, कसरी पिउने र कहिले पिउने ? यसबारे मानिसमा ठूलो अन्योल छ । धेरै मानिसले धेरै तरिकाले यसबारे बताउन सक्छन् । तर, पानीको मात्रा र समयबारे भने आयुर्वेदको आफ्नै नियम छ । आयुर्वेदका अनुसार सही समय र मात्रामा पिइयो भने पानीले औषधिको समेत काम गर्छ । तर, गलत तरिका र समयमा पानी पिउनाले शरीरमै हानि पु¥याउँछ । यसबारे आयुर्वेदिक डा. अबरार मुल्तानी यसरी बताउँछन् :
-बिहान उठ्नेबित्तिकै पानी पिउनु स्वास्थ्यका लागि उत्तम मानिन्छ ।
फाइदा : यसरी पानी पिउनाले यसले शरीरमा डिटाक्स बनाउँछ र मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्ने काम गर्छ ।
– धेरै मानिसको शारीरिक व्यायाम गरेपछि पानी पिउने बानी हुन्छ । तर, स्वास्थ्यका लागि भने व्यायाम गर्नुभन्दा १० मिनेटअगाडि पिउनु राम्रो मानिन्छ ।
फाइदा : यसले शरीरको शक्तिलाई कमजोर हुन दिँदैन ।
– व्यायामपछि पिउने बानी भने पनि तत्काल पिउनु हुँदैन । शारीरिक व्यायाम गरेको २० मिनेटपछि पानी पिउने बानी गर्नुपर्दछ ।
फाइदा : यसो गर्दा शरीरलाई हाइड्रेट बनाइराख्छ ।
– हामी चिया, कफी अत्यधिक मात्रामा सेवन गर्ने गर्दछौँ । तर, चिया वा कफी पिउनुअघि पानी पिउनु बढी हितकर हुन्छ ।
फाइदा : यस्तो बानीले शरीरमा एसिडिटीको समस्या हुन दिँदैन ।
– धेरैलाई यसबारे थाहा नहुन सक्छ कि नुहाउनुअघि पनि पानी पिउन आवश्यक छ ।
फाइदा : यसरी पिउने पानीले शरीरको रक्तचापलाई सन्तुलनमा राख्ने काम गर्दछ ।
– धेरै नेपाली खानसँगै पानी पिउने गर्दछन् । तर, स्वास्थ्यका लागि भने यो त्यति धेरै स्वस्थकर मानिँदैन । खाना खानुभन्दा ३० मिनेटपछि मात्र पानी पिउनुपर्दछ ।
फाइदा : यसो गर्दा पाचन प्रणाली चुस्त हुन्छ ।
– अपराह्नको खाजा खानुभन्दा पहिले पनि पानी पिउनु उपयुक्त हुन्छ ।
फाइदा : यसरी पिएको पानीले खाजालाई हेभी बनाउन दिँदैन । र, पाचन प्रणालीमा समेत सुधार हुन्छ ।
– हामी आफूलाई थकान वा टेन्सन महसुस भएका वेला छटपटाइरहेका हुन्छौँ । के गर्ने थाहा हुँदैन । यतिवेला पिएको एक गिलास पानीले ठूलो काम गर्दछ ।
फाइदा : यतिवेला पिएको पानीले मस्तिष्कमा रिल्याक्स गराउने काम गर्छ ।
– रातको समय सुत्नुअघि पिएको पानीले पनि स्वास्थ्यका लागि ठूलो अर्थ राख्छ ।
फाइदा : यतिवेला पिएको पानीले स्ट्रोक र हर्टअट्याक हुनबाट बचाउने काम गर्छ ।
पानी पिउनुका फाइदै फाइदाः
पानी जिवनको आधार हो । पानी विना कुनैपनि जिवको अस्तित्व सम्भव छैन । हाम्रो सरीरको अधिकांस हिस्सा पानीले नै ओगटेको हुन्छ । एक वयस्क पुरुषको सरीरको कुल तौलको झण्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा पानी भने महिलाको सरीरको तौलको ५२ प्रतिशत ।
दुब्लो पातलो मानिसको सरीरमा मोटो मानिसमा भन्दा पानीको मात्रा बढि हुन्छ । यसको मुख्य कारण के हो भने बोसोको तुलनामा मांशपेशीमा पानी संचय गर्ने क्षमता बढि हुन्छ । यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने मोटोपनाबाट ग्रसित मानिसको सरीरमा पानीको हाहाकार हुने हुनाले विभिन्न खाले रक्तविकार तथा अन्य रोगको जोखिम बढ्छ ।
दिनभर स्वास प्रस्वासमा झण्डै २-३ कप पानी खर्च हुन्छ । पसिना तथा पिसाबको रुपमा निस्कने पानीले सरीरमा रहेका हानिकारक तत्वहरुलाई बाहिर निकाल्ने काम गर्छ । सरीरमा १० प्रतिशत तरल पदार्थ कम हुने हो भने पनि डिहाइड्रेसनको खतरा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले मृगौलाको स्वास्थ्यका लागि समेत पानी पिइरहनु पर्दछ ।
सरीरमा पानी कम हुनाले टाउको दुख्ने, मांशपेशीमा कमजोरी उत्पन्न हुने, थकान, स्मरण शक्तिमा ह्रास जस्ता समस्या उत्पन्न हुन्छन् ।
पर्याप्त पानी पिउनाले सरीरको छाला चम्किलो हुने, अनुहार उज्यालो हुनका साथै चाउरीपन समेत कम गर्छ । विज्ञहरुका अनुसार पानी छालाको लागि प्राकृतिक पोषक हो ।
खाना खानुभन्दा ३० मिनेट पहिले २ गिलास पानी पिउनाले पाचन शक्ति बढ्दछ । बिहान उठेसँगै १ गिलास पानी पिएर मात्र अन्य भोजन गर्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ ।
सुत्नुभन्दा पहिले पानी पिउनु मुटुका लागि लाभदायी हुन्छ र नुहाएपछि पानी पिउने बानीले रक्तचाप कम हुने जोखिमबाट बचाउन मद्दत गर्दछ ।
पर्याप्त पानी पिउनाले सरीरबाट हानिकारक तत्वको निष्कासन सहज हुन्छ, जसका कारण पत्थरी जस्ता समस्या दूर हुन्छन् ।
भोजनलाई पचाउनका लागि पेटमा इन्जाइम तथा अम्ल समेतको उत्पादन हुन्छ । यस्तो अम्ललाई निस्कृय बनाउनका लागि पर्याप्त पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ , यदि पानी कम पिउने हो भने त्यसले ग्यास्टि्रक, अपच जस्ता समस्या निम्ताउँछ ।
Don't Miss it आलुबखडा खानु भएकाे छ ? यस्ता छन् यसका फाइदा
Up Next पशुबाट मानिसमा फैलिने राेगहरूकाे समाधान कसरी गर्ने ? जान्नुहाेस्
23 hours ago Pradeep Karki